छिमेकी छन् समाज पनि छ तर सं’कटमा कोहि छैन, अमेरिकामा सन्तान नेपालमा चि’च्याह’ट ! – Kavrepati
Home / समाचार / छिमेकी छन् समाज पनि छ तर सं’कटमा कोहि छैन, अमेरिकामा सन्तान नेपालमा चि’च्याह’ट !
admin4weeks ago	समाचार Leaveacomment 192 Views
काभ्रे ।घटना १, सम्पति छ । सन्तान छन् । आफन्त छन् । छिमेकी छन् । समाज पनि छ । तर सं’कटमा नजिक कोहि छैन । को-भि’ड-१९ ले नि’म्त्याएको सं’कटले झनै टाढा बनाउँदै छ समाज । भावना भएर मात्रै हुँदो रहेनछ त्यसको स्प’र्श हुन नसक्दा ब्यक्तिले मा’नव भएको महसुस गर्न सक्दैन ।
बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर १० मा एउटा परिवार छ । त्यो परिवारका सन्तान अमेरिकामा छन् । अमेरिकाबाट हरेक दिन अभिभावकलाई गर्नु पर्ने माया, सद्भाव र रेखदेख नियमित हुन्छ । प्रविधिको माध्यमबाट गर्नु पर्ने कर्तब्य सबै पुरा भएकै छ ।अभिभावकसँग सन्तान नहुँदा जतिसुकै माया गरेको लागे पनि अ’पुरा हुने रहेछ ।
घर छ । सम्पति प्रशस्तै छ । आफन्तहरु पनि छन् । दाजुभाई पनि छन् । तर यो सं’कटमा कोहि आ’फ्ना हुन सकेनन् । भाडामा बस्नेहरु सहयोगिकै रुपमा थिए । सरकारले लगाएको नि’षेधाज्ञाले उनिहरु पनि आफ्नै घर गाउँ फर्के । घरमा जे’ष्ठ नागरिक दुई जना मात्रै ।
शुरुमा जेष्ठ नागरिक मध्ये महिलालाई अलिक गा’ह्रो भयो । अमेरिकामा रहेका सन्तानलाई स’म’स्या बताए । बनेपामा रहेका आफन्तलाई खबर गरे । को-भि’डको आशंकामा घर भित्र कोहि जान मानेनन् । जेष्ठ नागरिक दुबैले खाना पकाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । केहि छाक भो’कै बस्न बा’ध्य भए ।
साथिभाईले घरको मुल ढोकामा खानाको प्या’केट ल्याएर राखिदिए । बनेपाका सक्रिय युवाहरुले केहि दिन खाना ढोकामा पुर्‍याए । ढोकामा राखेको खाना समेत माथी लैजाने हि’म्मत दुबैमा भएन । दुबै जनालाई को-भि’ड’को लक्षण मिल्न गयो । ज्वरोका कारण थलिएका बृ’द्धबृ’द्धाको उपचार आवश्यक भयो ।
अस्पताल लैजाने सन्तान नेपालमा छैनन । आफन्त, छि’मेकी त झनै भएनन । को-भि’ड स’र्ने ड’रले घरमा प्रवेश गर्न कसैले सा’हस देखाएनन । सन्तान अमेरिकामा । अभिभावकको चि’च्या’ह’ट नेपालमा ।अमेरिकामा रहेका सन्तानले धेरै ठुलो प्रयास पछि अस्पतालमा सम्पर्क गरे ।
बनेपा नगरपालिकाले खोलेको को-भि’ड डे’डिकेटेड अस्पतालले सन्तानको म’ञ्जुरी’नामा मा’ग्यो । इमेल मार्फत सन्तानको म’ञ्जुरी प्राप्त गरे पछि बनेपाको को-भि’ड डे’डिके’टेड भोमी अस्पतालबाट गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरबाटै दुबै जनाको उ’द्दार गरी अस्पताल ल्यायो ।
को-भि’ड पोजेटिभ देखिए सँगै उहाँहरु दुबैजनालाई आ’ईसियु कक्षमा राखेर उपचार शुरु गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक दम्पतिका लागि अस्पताल सन्’तान भन्दा माथी भ’गवान बनिदियो । दम्पती दुबैले भोमी को-भि’ड डे’डिकेटेड अस्पताललाई धन्यवाद दिएका छन् ।
घटना २– बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ७ । बनेपाको मुख्य चोक चारदोबाटो । पुरानो त्रिभुवनको शा’लिकको अगाडी । अग्लो घर । ब्यस्त सडक । २०७८ बैशाख २५ गते ४० बर्षिया महिलाको को’रोनाका कारण उपचारकै क्रममा नि’धन भयो । भाडामा कपडा पसल चलाउँदै आएकी महिलाको नि’धन पछि घरधनीलाई छ’ट्टपट्टि भयो ।
बैशाख २६ गते घर धनी ४६ वर्षिय युवा बनेपा नगरपालिकामा स्वाव परिक्षणका लागि पुगे । ढि’लो भएका कारण स्वाव नदिई फर्किए । केहि दिन देखि उनमा को’रोनाको लक्षण मि’ल्दोजु’ल्दो ज्वरो थियो । बैशाख २७ गते वि’हानै ओ’छ्यानमै उनको नि’धन भयो ।
शं’कास्पद को’रोना । भाडामा बस्नेको को’रोनाबाट नि’धन । परिवार आ’त्तियो । आफन्तलाई खवर गरे । त’त्काल घर भित्र कोहि जान सकेन । प्रहरी, प्रशासन, सेना, स्वा’स्थ्यकर्मी सबैलाई हा’रगु’हार भयो । घर भित्र प्रवेश गरी शव उठाएर अ’न्त्ये’ष्टी गर्न कोहि तयार भएन ।
ज’नप्रतिनिधि, नगरपालिका सबैको प्र’यास नि’रर्थक रह्यो । अन्ततः आफन्तहरुले पशुपतिबाट श’व उठाउने तीन ब्यक्ति ल्या’ए । दिउसो ४ बजे ओ’छ्यानमै रहेको श’वलाई त’न्नामा पो’को पारेर बो’ले’रो’मा अ’न्त्ये’ष्टी’का लागि पशुपति पु’र्‍याईयो ।न छिमेकी, न दाजुभाई, न आफन्त ।
को’रोनाको त्रा’सले आफन्तले श’व छुने आँ’टसम्म गर्न सकेनन । श्रीमती र तीन छोरीका आँ’शु रो’किएनन । परिवार शो’कमा छ ।जिल्लाका दुई नमुना घ’टना । यस्ता घटनाले समाजमा मा’नवि’यता ह’राउँदै गएको पुष्टी गराउँछ । को’रोना संक्रमण फै’लन नदिन राख्नु पर्ने भौ’तिक दुरीका कारण मान्छे भित्रको मा’न्छे ह’राउँदै जान थालेको छ ।
एक पछि अर्काे सं’कट टा’र्न सु’रक्षाका सबै उपाय अ’पनाउँदै मा’नवि’य सेवामा लाग्नु पर्ने आजको पु’स्ता समेत यस्ता घ’टनामा र’मिते बन्न बा’ध्य भएको छ । दे’खासि’खीले सन्तानको खु’शी भन्दै विकसित राष्ट्र पठाउने अभिभावकले भो’ग्न थालेका यस्ता कयौ स’मस्या छन् ।
सबैथो’क छ सन्तान आफुसँग छैनन । सम्पति छ आ’फन्त छैनन । मान्छे आफ्नो रो’ग हैन । जिल्लामा फै’लदै गएको संक्रमण न्यु’निकरण, रोकथाम र उपचारमा सहजिकरण गर्न बनेपाका युवाहरुले अ’नलाईन अन्र्तक्रिया संचालन गरिरहेका छन् । उक्त छ’लफलमा यस्ता स’मस्याहरु स’माधानका लागि युवाहरुको सक्रियताका बारेमा छलफल भएको बनेपाका सक्रिय युवा सुरज मकै श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
को’रोना भाईरसका कारण भन्दा शं’कास्पद निधन धेरै हुन था’लेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । परिक्षण नै नगर्ने प्रवृत्ति, परिक्षण सहज नगरिदिने स्था’नीय सरकार र उपचार पाउन सकिदैन भन्ने ड’रका कारण सर्वसाधारणले परिक्षण र उपचार विना नै ज्यान गु’माउन थालेका छन् ।नेपाल समाचारपत्र
Previous विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली कलाकार चिन्नुहाेस
Next ५ बर्ष कान्छा प्रेमीसँग बिहे गरेकी रश्मीको फोटोको ट्याटु श्रीमानको छातीमा, रहस्य यस्तो रहेछ